Wararka Maanta: Sabti, Aug 4 , 2012-Shacabka Degmada Huriwaa oo Maanta dhigay Dibadbax ay uga Cabanayaan dhac ay sheegeen inay u geystaan Ciidamada DKMG ah
Dibadbaxayaasha ayaa waxay sheegeen in ciidamada DKMG Soomaaliya ay xilliyada habeenkii ah u geysataan dhac baahsan, iyagoo xusay in xalay la dhacay bakhaarro ku yaalla Suuqa Xoolaha, taasoo ay sheegeen inaysan u adkeysan karin.
"Ciidamada dowladda KMG ah waxay xalay jabsadeen bakhaarro ku yaalla Suuqa Xoolaha, iyagoo agabkii yaallay ku rartay gaadiid ay wateen," ayuu yiri mid ka mid ah dadkii dibadbaxa dhigayay oo saxaafada la hadlay.
Bannaabaxayaal kale oo iyaguna saxaafada la hadlay ayaa sheegay in ciidamada DKMG ah ay kufsi u geystaan haweenk xiliyada habeenkii, iyagoo sheegay inay ka doonayaan dowlada inay damaanad-qaaddo ammaankooda.
"Goobihii ganacsiga oo dhan waan xirnay, waayo waxaan doonaynaa inaan muujinno shucuurteenna ku aaddan dhibaatada nalagu hayo," ayuu yiri dibadbaxe kale, balse ma jiro hadal weli kasoo baxay dhinaca dowladda KMG ah ee Soomaaliya.
Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa ahayd markii dibadbax noocan oo kale ah uu ka dhacay degmadaas, inkastoo aysan saraakiisha dowlada ka hadlin, waxaana ay ka mid tahay degmadan degmooyinka ku yaala dhinaca waqooyi ee Muqdisho.
Dhanka kale, ciidammo ka tirsan kuwa dowladda KMG ah ayaa maanta ku toogtay gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha wiil arday ah oo u socday jaamacad, waxaana uu dilkiisa yimid kadib markii ay ka shakiyeen ciidamada dowlada oo howlaglo lagu sugayay amaanka kawaday suuqaas.